Ahoana ny famerenana ny tenimiafina Gmail | Vaovao Gadget
Placeholder sary Laura Torres | 07/06/2022 17:49 | fampiharana
Google manolotra serivisy isan-karazany azonao idirana, miaraka amin'ny dingana tsotra toy ny famoronana kaonty. Izy io dia a serivisy maimaimpoana, ary miaraka amin'izany isika dia afaka mampiasa ireo fampiharana samihafa atolony mailaka, automation birao, fitahirizana rahona, YouTube, ankoatry ny hafa. Ary koa, miaraka amin'ny kaonty Gmail, afaka miditra amin'ny tranokala hafa ianao amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny tenanao amin'ny solonanarana sy tenimiafina.
fa, Ahoana raha very ny tenimiafina amin'ny kaonty Gmail? Eto izahay dia hampianatra anao ny fomba hamerenana azy io.
1 Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafina Gmail
1.1 Hadinonao ve ny teny miafinao
1.2 Ahoana ny fomba hamoronana tenimiafina matanjaka ho an'ny Gmail?
2 Adinonao ny adiresy mailakao
3 Misy olon-kafa mampiasa ny kaontinao
4 Tsy afaka miditra ianao noho ny antony hafa
5 Avereno ny kaonty Google voafafa
6 Tsy afaka mamerina ny tenimiafina Gmail aho
Amin'ny ankapobeny, ny serivisy rehetra mila fisoratana anarana Manana rafitra ahafahantsika mamerina ny tenimiafina izy ireo raha sendra misy very na halatra, ary tsy ho latsa-danja ny Google. Mety ho iharan'ny fanafihana cyber ianao, ary hangalatra ny tenimiafinao. Na noho ianao tsy nampiasa azy io nandritra ny fotoana kelikely ka nanadino ny tenimiafinao. Mampiasa ny safidy ny fanarenana ny teny fanalahidy, afaka mametraka tenimiafina vaovao ianao, fa tsy maintsy mandresy lahatra an'i Google aloha ianao fa ianao no tompon'io kaonty io.
rehefa Mamorona kaonty Gmail izahay, dia mangataka andiam-baovao momba ny tena manokana sy ny fifandraisana izay mety ilaina raha very ny tenimiafinao. Mampiasà mailaka backup fotsiny, ampifanaraho amin'ny findainay, na ampio ny nomeraon-telefaoninao dia afaka mampiasa ny kaontinao Gmail indray ianao, mora.
avy eo Manapaka ny dingana tsy maintsy arahinao izahay. Na izany aza, raha miresaka momba ny kaonty tsy an'ny tena manokana, izany hoe, izay noforonina ho anao amin'ny alalan'ny a raharaham-barotra (ohatra, asa na sekoly), mety tsy hahasoa anao ireo famantarana ireo. Noho izany Manoro hevitra anao izahay hijery amin'ny mpitantana ny kaontinao (ilay tompon'andraikitra namorona ny kaonty).
Hadinonao ve ny teny miafinao
Araho ireto dingana ireto mba hamerenana ny kaonty Google na Gmail anaol:
Hanontany fanontaniana vitsivitsy aminao i Google hanamarina fa anao ny kaonty. Miezaha hamaly azy ireo.
Raha sendra olana ianao dia andramo manaraka ny bitsika momba ny fanarenana ny kaonty. Aza mandingana fanontaniana ary miezaha hamaly amim-pahatsorana.
Ampiasao ny solosaina, tablette na smartphone izay idiranao matetika.
EAmpiasao ny navigateur mahazatra anao ary atombohy amin'ny toerana mahazatra anao ny fivoriana, ohatra, avy any an-trano.
Ny fanontaniana momba ny fiarovana izay napetrakao tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy soratana mitovy. Raha atao amin'ny litera lehibe na isa, ohatra.
Hanova ny tenimiafinao rehefa misy asaina. Misafidiana iray azo antoka ary tsy mbola nampiasainao teo amin'ity kaonty ity.
Ahoana ny fomba hamoronana tenimiafina matanjaka ho an'ny Gmail?
Raha tsy afaka miditra amin'ny kaontinao Gmail ianao noho ny tenimiafina diso dia afaka mangataka tenimiafina vaovao ianao. Ho fiarovana, Gmail dia tsy handefa ny tenimiafinao amin'izao fotoana izao hahatsiarovana azy. Noho izany dia tsy maintsy manamarina ny mombamomba anao ianao ary mampiditra tenimiafina vaovao azonao ampiasaina manomboka amin'io fotoana io.
Rehefa mamorona tenimiafina vaovao, Manoro hevitra anao izahay hanaraka toro-hevitra vitsivitsy ho fiarovana anao. Tena tsara raha afaka mamorona filaharan-tsoratra tsy misy dikany izay ho mora hotadidinao ianao. Lasa izao:
Teny miafina dia saro-pady amin'ny sora-baventy ary soso-kevitra ny hampiasa vola be. Na dia tsy azo atao aza ny litera accent.
Tsy maintsy misy isa ny tenimiafina. Ny teny miafina amin'ny litera ihany dia tsy soso-kevitra satria mora kokoa ny mahazo azy. Na koa hoe mifanesy ny isa, fa mifanelanelana litera.
Tokony hisy marika miorina amin'ny ASCII (@, $, %, sns.)
Tsy manoro hevitra anao izahay hanoratra teny, litera na isa fampiasa matetika.
Amin'izany fomba izany dia hanana tenimiafina sarotra kokoa ho an'ireo mpijirika na mpitsikilo ianao handika.
Manoro hevitra izahay ny hitazona azy amin'ny toerana azo antoka na hampiasa mpitantana ny tenimiafina. Raha ny marina Google Chrome Misy iray ao anatiny.
Adinonao ny adiresy mailakao
Tamin'ny andro nanaovanao kaonty Gmail hahafahanao mampiasa fitaovana Android, miaraka amin'ny takelaka na smartphone, ary nampiasanao izany fotsiny. Ankehitriny, tapaka ny findainao ary rehefa mividy vaovao ianao dia tsy tadidinao ny adiresy mailakao. Tsy misy na inona na inona mitranga, manana ny vahaolana izahay:
Mila nomeraon-telefaonina fanarenana na adiresy mailaka ho an'ny kaonty nampifandraisinao tamin'izany fotoana izany ianao (kaonty hafa anananao, ny kaontin'ny namanao, ny iray amin'ny zanakao, ny ray aman-dreninao...).
Ny anarana feno napetrakao amin'ny kaonty. Amin'ny ankapobeny, ny anaranao sy ny anaranao matetika.
Avy eto dia araho ny toromarika hanamarinana ny maha-izy anao, ary izany dia hampiseho anao a lisitry ny solon'anarana mifanaraka amin'ny kaontinao.
Misy olon-kafa mampiasa ny kaontinao
Raha mahatsikaritra hetsika ao amin'ny kaontinao Google, Gmail, na vokatra Google hafa tsy fantatrao ianao, mety misy olon-kafa mampiasa azy tsy nahazoana alalana. Raha heverinao fa voajirika ny kaontinao Google na Gmail, araho ireto dingana ireto mba hahitana hetsika mampiahiahy, hamerina ny kaontinao ary arovy izany:
Midira amin'ny kaontinao Google. Raha tsy afaka miditra ianao dia araho ireo dingana etsy ambony hamerenana ny kaontinao.
Avereno jerena ny hetsika ary arovy ny kaontinao Google voajirika. Avereno jerena ny asan'ny kaontinao sy ny fitaovana nampiasana ny kaontinao.
Mampihatra fepetra fiarovana bebe kokoa. Azonao atao ny manetsika ny fanamarinana dingana roa, mifandray amin'ny bankinao na ny manampahefana eo an-toerana, manala rindrankajy maloto izay hitan'ny antivirus anao, mametraka navigateur azo antoka kokoa, mametraka ny fanitarana Fanairana ny fiarovana ny tenimiafina, arovy ny fampiharana sy ny fitaovanao amin'ny tenimiafina mba tsy hisy olona afaka miditra. ho azy ireo.
Tsy afaka miditra ianao noho ny antony hafa
Raha tsy afaka miditra ianao noho ny antony hafa ankoatra ny voalaza etsy ambony dia aza manahy. Google dia manome anao safidy hafa manampy anao.
Avereno ny kaonty Google voafafa
Mety ho nofafanao ny kaonty Gmail taloha, ary mila izany ianao izao. Raha misy zavatra tsara iray momba an'i Google dia mety mbola ho azonao averina izany. Na izany aza, raha nofafanao hatry ny ela, misy ny mety tsy ho tafaverina ny angon-drakitra voarakitra ao. Raha mahavita mamerina azy ianao dia afaka miditra amin'ny Gmail, Google Play ary serivisy Google hafa toy ny mahazatra.
Aza adino fa rehefa sitrana izany mametraka tenimiafina matanjaka.
Tsy afaka mamerina ny tenimiafina Gmail aho
Raha toa ka tsy afaka mamerina ny tenimiafinao Gmail ianao rehefa avy nanandrana, ary miaraka amin'izy ireo ny kaontinao dia miala tsiny izahay. Mety hitranga noho ny antony maro izany, ny iray amin'izy ireo dia mety tsy azo atao ny manamarina fa anao io kaonty io. Ka araka ny fitenenana "satetika madio". Manasa anao izahay hanao iray kaonty vaovao, fa amin'ity indray mitoraka ity dia ataovy izay hahazoana antoka fa azo antoka ny tenimiafinao, ary amin'izay fotoana izay dia ho hitanao mora foana izany.
Manantena aho fa nahasoa anao ity fampahalalana ity, ary afaka mamerina ny tenimiafinao Gmail ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafina Gmail